Health | Posted on Nov 3, 2018 by Ja Seng Pan
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်ပြီး အမြင်ဆန်းနေစေမယ့်နေ့ လယ်စာများ
အလွယ်တကူ ချက်ပြုတ်လို့ ရပြီး စားချင်စဖွယ်ဖြစ်နေမှာပါ၊
ပုံမှန်စားနေကျနေ့ လည်စာကို ရိုးအီနေပြီ။ အပြင်မှာစားနေတဲ့ အစားအသောက်တွေက လဲ သန့် ရှင်းမှုအတွက် စိတ်မချရဘူး။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်တဲ့ နေ့ လည်စာကိုလွယ်လွယ်ကူကူ စားသုံးနိုင်ဖို့ အတွက် ဒီလိုဟင်းပွဲတွေက အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ
Carbohydrate သိပ်မများတဲ့ နေ့ လည်စာကို ရှာနေပါသလား? ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် အရသာရှိတဲ့ Spicy Shrimp and Avocado Lettuce Wraps ကို healthy ဖြစ်တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်အဖြစ် သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ။ အထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ ထောပတ်သီး နဲ့ ခနွာကိုယ်အတွက် ကောင်းတဲ့ Healthy Fat တွေက ညနေစာ မတိုင်ခင်ထိကို အစာခံနေစေပါတယ်။
နေ့ လည်စာအတွက် ဟင်းအမယ်စုံစုံလင်လင်ပါတဲ့ ထမင်းဘူးကို ဘယ်သူက မကြိုက်ပဲနေမလဲနော်! Mediterranean အရသာ ပါဝင်တဲ့ ဒီလို Greek Style ဟင်းပွဲလေးက လွယ်ကူရိုးရှင်းပြီး အရသာစုံလင်တဲ့ နေ့ လည်စာအနေနဲ့သုံးဆောင်နိုင်ပြီပေါ့
အချိန်ယူလှိမ့်ရတဲ့ Sushi roll အစား ဒီလို မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြုလုပ်လို့ ရတဲ့ Sushi roll bowl တွေက နေ့ လည်စာအတွက် သိပ်ကို အဆင်ပြေပါတယ်။ အရသာ ပြည့်ဝသလို သက်သတ်လွတ်သမားတွေပါ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။
Mason Jar Salad တွေက စားချင်စဖွယ်ဖြစ်သလို ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကလဲ စုံစုံလင်လင်ပါပဲ။ ပထမဆုံး Dressing ကို အောက်ဆုံးအလွှာအဖြစ် ခံပြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တစ်လွှာချင်းစီ ထပ်လိုက်ပါ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ ဆလပ်ရွှက်ကို အပေါ်ဆုံးမှာတင်ပါ ကဲ အမိုက်စား နေ့ လည်စာကို ရရှိပြီပေါ့။
Trends | Posted on Jun 25, 2019
ဒီနှစ် runway မှာနေရာယူသွ...
Fashion News | Posted on Jun 25, 2019
ADIDAS LONG PADDED COATေ...
Red Carpet | Posted on Jun 24, 2019
People | Posted on Jun 24, 2019
နည်းပညာလောက ဟာ အမျိူးသမီး...
Celebrity Style | Posted on Jun 22, 2019